XOR XO2 8.0 – Urban Transformer – 🛵 इलेक्ट्रिक स्कूटर 2021
8 केडीई (10.7 एचपी)
XO2 8.0 फ्रान्सबाट इलेक्ट्रिक स्कूटर अग्रगामी XOR (रोडमा Xrrordinaire वस्तु) बाट एक तहयोग्य बिजुली मोटरसाइकल स्कूटर हो। स्कूटर 2007 मा सुरू भएको थियो र पहिलो बिजुली स्कूटरको बीचमा थियो।
स्कूटर दुई संस्करणहरूमा उपलब्ध छ: 4.0सँग 8,000 वाट (35,000 वाट चोटी पावर) मोटर छ।
XO2 8.0 125cc स्कूटर स्कूटर हो र 120 किलोमिटर / एच को माथिल्लो गति छ। स्कूटरले 6.2 सेकेन्डमा0देखि 100 किलोमिटर / घन्टासम्म गति पुर्याउँछ।
स्कूटरमा 160 किलोमिटर (पारिस्थितिकी मोड) को दायरासँग हटाउन सकिने4केडीई डब्लुएच लिथियम ब्याट्री छ। ब्याट्रिको चार्ज समय2घण्टा छ। ब्याट्रिमा ट्रली प्रणाली छ र सजिलो छ।
ब्याट्री असाधारण गुण हो र 200,000 किलोमिटरको आधिकारिक रेट गरिएको जीवन समय छ।
स्कूटरले 30 सेकेन्डमा गुणा गर्न र प्रकट गर्न सक्छ। तह गरिएको अवस्थामा, स्कूटर एक सानो कारको बूटमा फिट हुन्छ।
तहमा मोड, स्कूटर र ब्याट्री एक ट्रॉलीको रूपमा एकै ठाउँमा जान सकिन्छ। स्कूटर को तह आकार 1020mm एक्स 420 मिमी x 700mm छ। (एल x डब्लू एक्स एच)। ब्याट्रि बिना स्कूटरको वजन 63 कि.मि. ब्याट्रिको वजन 40 किलोग्राम हुन्छ।
स्कूटरले दुई व्यक्तिको लागि आरामदायक बैठक प्रदान गर्दछ। ड्राइभ गर्दा स्कूटर सामानको लागि धेरै ठाउँ प्रदान गर्दछ।
स्कूटर एक लकयोग्य डिब्बे छ जुन हेलमेटको लागि ठाउँ प्रदान गर्दछ।
स्कूटर एबीएस संग अगाडि र पछि डिस्क ब्रेक छ र पुनरुत्थान ब्रेकिंग संग सुसज्जित छ जसमा ब्रेकिंग को बैटरी लाई बैटरी मा फर्काइएको छ। पुनर्जागरण ब्रेकिंग डिस्क ब्रेकबाट वायु प्रदूषण रोक्नको लागि मद्दत गर्दछ।
स्कूटरमा पार्किंग सहायक छ।
स्कूटर व्यावहारिक रूपमा रखरखाव हो।
2021 XOR Motors मोडेलहरू
फिल्टर अवलोकनमा सबै XOR Motors स्कूटरहरू हेर्नुहोस्: